यसरी स्वस्थ्य र सुमधुर हुन्छ दाम्पत्य सम्बन्ध  OnlineKhabar
दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुमधुर र प्रगाढ राख्ने तत्व के-के हुन् ? हामी फ्याट्टै भन्न सक्छौ, प्रेम । एकअर्कामा गरिने प्रेमले नै दम्पतीलाई जोड्ने हो । त्यससँगै विश्वास, समर्पण र अन्तरंग सम्बन्धले दाम्पत्य जीवनलाई खुसी एवं सुखी तुल्याउँछ । तर, यतिमात्र काफी छ त ?
सुन्दा सामान्य लाग्छ, तर आफ्नो पार्टनरसँग जब बिहान एकसाथ कतै दौडन निस्कनुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ भने त्यसले दम्पतीको सम्बन्ध थप कसिलो बनाउन भूमिका खेल्छ ।
अक्सर बिहान पति वा पत्नीमध्ये एकजना मात्र मर्निङ वाकमा निस्कन्छन् । तर दुबैजना एकसाथ मर्निङवाक निस्कने हो भने, बेग्लै रोमाञ्चकता अनुभव हुन्छ । साथै, मर्निङवाकको क्रममा हाँसीमजाक गर्न पाइन्छ ।
मर्निङवाकले दुबैको मुड फ्रेस हुन्छ । स्वस्थ्य र तन्दुरुती हुन्छ । यसले दाम्पत्य सम्बन्ध थप रसिलो र कसिलो बनाउँछ ।
२०७४ भदौ २८ गते १४:४९ मा प्रकाशित